Kudzidziswa neHGH kana kuti kuwana muviri wakakwana sei?
NeHGH Thailand February 21, 2019
1. Kudzidziswa neHGH kana kuti kuwana muviri wakakwana sei?
2. HGH inobatsira kuti uwane muviri wako weroto
3. Kurasikirwa kwekurema ndeimwe yezvinangwa zvekukura kwehomoni.
4. Kuchinja kudya tsika: Ko kukura kwehomoni kunoshanda pasina "rubatsiro" here?
5. Kuchinja tsika dzakaipa nevakanaka: kuitira kuti iyo mapaundi akawedzerwa asadzoke
6. Kukura hormone - a panacea yezvirwere zvose, asi kwete kunze kwekubata kwako
7. Dr Life inodzidzisa sei?
8. Basa racho harisi kudzokera kumigumisiro yekare!
9. Inotungamirira nyika kuti ikure hormone inoda
10. Nzira yekubudirira sei mugumisiro wakanaka?
11. Kuzorodza zvakakwana nekudzorerazve: zvinobatsira zvekuzorora muThailand
Uri kuzvitambudza nemishonga inopisa here? Kwemaawa akawanda iwe unonyangarika mune zvekurovedza, asi hapana chigumisiro? Izvo zvinyoro zvako zvakanyatsonaka hazvikwanisi kukosha, uye iyo inonzi Human Growth Hormone.
Chibereko chacho hachisi chinhu chekuwedzera kwevanhu hormone, iyo inogona kukwanisa kuunza zvakakwana kutengesa nekugadzirisa maitiro mumutumbi wako.
HGH inobatsira kuti uwane muviri wako weroto
Zita rokuti "HGH" pacharo rinobvumira kushamwaridzana nehucheche. Zvechokwadi, kubvira panguva yekuberekwa kusvika kune imwe nguva, muviri wedu wakatambanudzwa, mapfupa anokura, maitiro emasumbu uye anova akawedzera. Somatotropin, yakagadzirwa ne anterior pituitary gland, ndiyo inotarisira zvose izvi.
Kusiyana nepfungwa, huwandu hwakawanda hwekukura kwehomoni hunobudiswa kwete mucheche uye kuyaruka, asi kubva ku20 kusvika ku25 makore. Iyi ndiyo yekare, apo ganda rinotarisa rutsva, kurasikirwa neaundi maundi mapaundi hakusi dambudziko, asi pane zvakawanda zvemasimba. Mumakore e30, kubudiswa kwetuatotropin kunonoka, uye nezera re 40-45, nhamba yaro inotanga kuderera nokukurumidza - kukwegura kunotanga.
Zvechokwadi, iyi inongova template chete, uye imwe neimwe yenyama inomunhu oga. Zvisinei, vanhu vose nokukurumidza kana kuti gare gare vanoona kuchinja kusingadzivisiki mumuviri wenyama uye kuneta, izvo zvinoreva kuti inguva yekuenda ACHETER HGH uye kuwedzerwa uhu hwako, kukwanisa kuderedza uremu nokukurumidza nekubatsirwa kwechinhu chakasikwa.
Saka iwe haungakure! Iwe uchawana mukana wakasiyana wekutarisa 20 ku 40, 40 kusvika ku70, nezvimwewo.
Kurasikirwa kwekurema ndeimwe yezvinangwa zvekukura kwehomoni.
Chero nyanzvi yezvakanaka ichabvumirana: kudarika kuwedzerwa kunowedzera kusvika kune makore anopfuura 5-10 makore. Hazvigoneki kuva nezvidimbu zvepaundi uye kutarisa vaduku, varume nevakadzi vakawanda vanosarudza kudzoka muviri unoyevedza uye kutaridzika kwehutano kunotarisana nebasa guru rekuderedza uremu.
Chii chinobatsira kukura hormone kurapwa?
- Pasi pesimba re somatotropin, puroteni yekare inoitwa, iyo inobatanidzwa zvakananga mukuvandudzika kwemashuga. Panzvimbo yekuora, iwe unowana nzira yekuvaka, uye ichi ndicho chiroto chaicho chevarimi venyama, vashandi vemafaro uye vamwe vatambi.
- Kukura kwehomoni kunobatanidza kushandiswa kwemagetsi mumutumbi. Mafuta haasisina kuiswa, anogadziriswa uye anonyorerwa zvakasununguka, sezvaanoita achiri muduku.
Nhanho yekuparadzwa kweprotein, iyo inonyanya kukosha hupenyu hunopa zvikamu zvevanhu, inofanirwa nekushanda kwakakodzera kweganda repituitary. Izvi zvinowedzera kubudirira.
- HGH inobatsira pakuparara kwemafuta acids. Zvose zvinodiwa zvinoshandiswa uye zvinoshandiswa nemasero, zvese zvinotorwa.
- Somatotropin haisi makemiti uye, kamwechete mumuviri, haisi kupindira nebasa rayo, izvo zvinoreva kuti hapana mimwe migumisiro inotevera ichatevera - utano chete, humiro hwemuviri hwakanaka uye hukama hwakanaka.
- Tinogumisa: to Tenga Genotropin - Kugadzirira kwedu kubva pakukura kwehomoni ndiyo mukana unoshamisa wekutapudza uremu panguva imwechete uye kuwana mutsara wakanaka wekusununguka. Uye muchimiro chebhonasi, unowana kukurumidza kuporesa maronda, simba remapfupa, tendon nemirasi.
Kuchinja kudya tsika: Ko kukura kwehomoni kunoshanda pasina "rubatsiro" here?
Zvechokwadi, mumwe nomumwe wedu anoda kuva nezvinhu zvose zvaanoda, nezvimwe, asi kwete kuona giro rimwe chete pachiyero. Hazviitiki! Kutenga kukura kwehomoni inofunga nemaune pfungwa yakakundikana mumamiriro ezvinhu apo munhu anoenderera mberi asingadzori kutora zvokudya zvinokuvadza.
Sei? Ngatidzokere kumasikirwo emuviri mumuviri. Iwe wakangodaro wakazadza vasikana nevakomana vakakwana, vana vakanyatsonaka mafuta. Hazviiti here kubereka Somatotropin? Aiwa, inobudiswa mumutengo wakakodzera maererano nezera. Zvose zviri nyore kwazvo - zvinokonzera kushandiswa kwemagetsi hazviregi kutarisana nechido, uye mafuta anowedzera pose pose zvichibvira.
Saka, chinhu chekutanga unofanira kuita apo iwe uchisarudza kutanga mushonga nekurasima hormone ndezvekufungisisa zvachose kudya kwako uye chikafu chekudya.
Miti inobatsira HGH kusarudza uye kuzadzisa basa rayo:
- chicken mazai
- hukuku nyama, veal uye nyuchi, hove
- mukaka uye mishonga yemisi
- peanuts uye walnuts
- buckwheat, rice uye oatmeal
- mbeu yezuva
- muviri wose
- cherry, aple, pear, peach uye machena
- tomato uye avocados
Zvokudya zvinorambidzwa neTAT zvinokonzerwa nokurasikirwa zvinosanganisira:
- mapeji nemamwe masipi
- jams, syrups uye kuchengetedza
- vanokanganisa, zvinopisa, chips
- ketchup uye mayonnaise
- yakabikwa, yakasvibiswa uye yakasvibiswa
- zvokudya zvinokurumidza, nezvimwe
Zvose izvi zvinogadzirisa hutoni hukura. Mukuwedzera, iwe unoda kudya mune zviduku zvishoma, kuchengetedza nguva pakati pezvokudya.
Kuchinja tsika dzakaipa nevakanaka: kuitira kuti iyo mapaundi akawedzerwa asadzoke
Vanodya noutano uye vateveri vehupenyu hwehutano hwakanaka pamwe chete: kana wakakwanisa kuderedza uremu, chigumisiro chinofanira kugadziriswa nguva dzose. Nzira yekuzviita sei? Zviri nyore - tsanangurira mitemo yekudya kwakakodzera zvakanyanya uye kubvisa maitiro akaipa.
Iyo yekupedzisira inofanira kuchinjwa nekanaka, ichibatsira kubatwa kwekuwedzera hormone:
- Utano hwakanaka. Iko yakawanda yekukura kwehomoni inobudiswa pakati pe23-00 uye 2-00 o'clock usiku. Panguva ino iwe zvechokwadi unoda kurara. Zvakanaka, nguva yekuzorora inofanira kugara maawa 8.
- Kushushikana mupfungwa. Vanachiremba, vanodzidzisa uye vane nguva refu-refu vanorayira nguva nenguva kuronga "kununura" mumuviri. Vanogona kuva douche, kuenda kune sauna, nezvimwewo. Option for the most indecisive - a douche.
- Kushanda nguva dzose. Makirasi ndiyo mishonga yakanakisisa ye muscle fiber atrophy. Usakanganwa nezvemitoro ine utano, iyo inobatsira pakuwana kwekunakidzwa kwemuviri wakanaka uye mafomu anodiwa.
Mubvunzo unokosha: chii chatinofanira kusiya? Izvi zvinosvuta, kunwa doro, zvinodhaka, nezvimwewo. Edzai kudzivisa kusagadzikana, kukakavara mamiriro epamba uye kubasa, nezvimwe zvinhu zvisina kunaka.
Kukura hormone - a panacea yezvirwere zvose, asi kwete kunze kwekubata kwako
Kubva pamusoro apa, tinogona kugumisa: kutenga mutemo kuti hutoni hwevanhu huve hukuru, asi nekuda kwekugamuchira kwayo, unofanira kuedza. Mune mamwe mazwi, kuora muviri pasina kushanda hakuzoshandi uye iwe haufaniri kutarisira chishamiso, asi nenzira yakarurama yemararamiro ako, zvinenge zvisingatore nguva refu kumirira.
Haana kuona pfungwa muzvokudya uye kushanda here? Iye zvino zvicharatidzika -batsira muviri wako!
Dr Life inodzidzisa sei?
Rimwe zuva, mhuri chiremba Jeffrey Life akatarisa kuratidzwa kwake mugirazi uye akaona murume akwegura, murume akwegura ane matambudziko akawanda emwoyo uye pangozi yehuga cheshuga.
Zuva iri raiva rekushandura muhupenyu hwechiremba wekuAmerica chaiwo - aisagona kungoshanduka pachake pachake, kuva muumbi wezvakagadzirwa kare mukurumbira wenyika, asi akadzidzisawo chidzidzo chakanakisisa kuvarwere vake.
The formula for Dr's Life kubudirira kunoumbwa nenhamba dzinoverengeka dzinokosha:
- mabasa epanyama (cardio nesimba simba);
- utano hwakanaka;
- hutsinye hwomudzidzisi wega-gungwa, uyo asina kubvumira murume ave-ane usimbe uye anokanganisa kubva pane zvidzidzo zvake.
Zvose zvakafamba zvakanaka. Mafuta akachinjwa nemasisita mashoma, uye zvinetso zvehutano zvakakurumidza kudzokera kumashure. Dhiyabhorosi Upenyu hwakanyatsofarira chimiro chake chitsva uye chimiro, kusvikira aziva kuti kukwegura kwaive kuchiri kuenderera mberi, akadzikira pasi, asi haana kumira kusvikira pakupedzisira.
Makore mashomanana anotevera, Jeffrey Life vakazvitsaurira pakudzidza "kukwegura kwakanaka uye kwakagwinya", kuwana vanhu kukura kwehomoni. Mushure mezvo, akatotumira bhuku rainzi "Purogiramu Youpenyu", Apo akaratidza kuti kubudirira kwake mukurwisa zvirwere kuri pamatatu matatu:
- Mahomoni ekukura
Basa racho harisi kudzokera kumigumisiro yekare!
Nhasi, mudiki mudiki munyika yose ane makore 81, anotarisa zvikuru, anonzwa achitsva uye ane simba, anoenderera mberi achitungamirira mararamiro anoshingaira uye akazarura webhusaiti apo anorayira vanhu pamusoro pe50 pamusoro pekudzivirira kukwegura.
"Kuva nehutano hakuna kumbobvira kwakanyanyisa uye kusati kwava kunonoka," anodaro Dr. Life, uye anofara kuratidza "mberi" uye "pashure" mifananidzo. Pamakore ekupedzisira e20, haasati asvika pedyo nehurumende iyo yakashamisika iye paakatarisa kuratidzwa kwake.
Inotungamirira nyika kuti ikure hormone inoda
Muenzaniso wekuzivikanwa Jeffrey Life kufara, pasina kuwedzerwa, nyika yose. Mamiriyoni evanhu akazova vateveri vegadziriro yekare yekuragura yechiremba. Nzira yechiremba weAmerica ndiyo inonyanya kudiwa pakati pevakwegura vayo, asi vamwe vanhu vanoda kuwedzera huduku hwavo kubva munyika dzakasiyana havaendi.
Zvigumisiro zvekutsvakurudza zvakazvimirira zvakaratidza kuti zviri pamutemo hormone inokura yevanhu inowanzozotengwa nevagari:
Nenzira, hazvibviri kutenga zvinodhaka pasina mushonga mune dzimwe nyika idzi, uye kunyanya pasina. Imwe yenzvimbo shomanana munyika umo kutenga HGH yekutengeswa kwekutsvaga uye kushandiswa kwega pachako hakusi dambudziko - iri Thailand, rinozivikanwa nokuda kwenguva refu.
Muparidzi mukuru uye nyanzvi yekutsvakurudza mundima yekukura hormone ndiyo kambani yedu. Pamusoro pewebsite yepamutemo iwe unogona kuwana ruzivo rwese rwekufarira uye kurongedza zvinhu nekuendesa.
Tinotengesa chikwata chepamusoro-soro chakavimbiswa kuti chibatsire muviri, uye tinokurudzira zvikuru kuti tisatenga fakes dzinogona kukonzera zvinetso zveutano.
Nzira yekubudirira sei mugumisiro wakanaka?
Saka, kuti uwane muviri wakakwana uye hutano hwakanaka, unoda kutenga hormone yakakura, utange kuita maitiro ekuita muviri kuti uwedzere musimba mashoma (zvichienderana nemudzidzisi wega) uye unamatira kune kudya. Zvinoratidzika zviri nyore, asi runyararo rwemhando yehupenyu hwemazuva ano nguva dzose inotasisa. Anowanzoziva?
Zvadaro tine chipo chinoshamisa pane iwe. Paradhiso chaiye paPasi - Thailand inokukoka iwe kuti uchinje zvachose hupenyu hwako.
Maererano nemabasa ezvambotaurwa Jeffrey Life uye zvidzidzo zvakawanda, hafu yegore zvakakosha kuti shanduko yakakwana yeT
e chimiro. Zvakadini nekupedza mwedzi iyi ye6 yekushandura muThailand?
Pano, hapana chichakuvhiringidza kubva kune zvinangwa zvako. Iwe pachako uchanzwa hupenyu hwehuduku husingagumi uye unobvumira muviri wako kuti unakidzwe nemhepo yekufema yakasununguka. Vadzidzisi veThai vave kwenguva yakareba vachizivikanwa sevateveri vakanakisisa vaDkt Life, uye chikafu, chikafu chekudya hachienzanisi nezvokudya zvaunotenga mumashambaguru eguta.
Uye bhonasi yakakura haisi kurindira chikuru chechidiki. Kuti utenge Genotropin muThailand, haufaniri kuwana chiremba, chiremba kubva kuchiremba nemamwe magwaro. Zvose zviri pano zvinongosikwa kuitira kuti iwe udzidze kudzora muviri wako, uite zvakanaka, wakagadzikana uye muduku.
Mazana evanhu vanobva kumativi ose enyika anouya pano gore negore nekuda kwekunaka uye utano. Join now!
Kuzorodza zvakakwana nekudzorerazve: zvinobatsira zvekuzorora muThailand
Kunyange zvakadaro mubvunzo? Iwe haugoni kusarudza pamatanho akadai akadaro? Kubva muzororo rino iwe uchadzoka somumwe munhu akasiyana-muduku, muduku uye ane utano. Chimbofunga zvinobatsira zvekuzorora muThailand:
- kukwanisa kutenga kodzero yekukura kwehomoni pamutengo unodhura;
- chivimbiso chakazara chepakutanga kwezvigadzirwa;
- kutonhora kwemamiriro okunze, izvo zvinobatsira kubvisa kunyanyisa kunaya, mafuta uye chepfu kubva mumuviri;
- kuwanda kwezvibereko nemiriwo zvakakura mumamiriro echisikiko pasina-makemikari - kudya kwakakodzera zvechokwadi;
- mhepo yakachena yegungwa inokurudzira mafungiro uye inokurudzira kuchinja;
- zvakawanda zvinofadza - hazvizovhunduswi;
- vadzidzisi vemapurogiramu avo vanonyatsoziva nzira dzekuvandudza nekuporesa.
Wedzera kune izvi zvisikwa zvisingaiti, zhizha rinogara nokusingaperi, jecha rakachena remahombekombe uye mvura yakasviba, vanhu vakanaka vakakomberedza. Paradhiso? Unogona kuva chikamu chayo nokukurumidza. Bhuku rako mathikiti uye bhuku Genotropin at HGH Thailand - iwe unokodzera muviri wakakwana munzvimbo yakakwana pasi pano!